Vagadziri veAspirator uye Fekitori | China Aspirator Vagadziri
AngelBiss Inotakurika Suction Machine, ine hunhu hwezvisikwa uye inotakurika. Iyo muchina pfungwa yechitarisiko dhizaini inotengeswa kubva kuGerman. Kubva pamunhu dhizaini dhizaini, ine yakarongedzwa dhizaini dhizaini, nyore-kuenda, yakazara chimiro cheinotakurika yekukweva muchina inoshamisira uye yakapusa.
AngelBiss Inotakurika Inobata Mashini inofambiswa nesimba remagetsi. Nezvakanakira zvakanakira: yakaderera ruzha, oiri yemahara, hukuru hukuru, huremu uye kuisirwa nyore Uye muchina muviri zvinhu zvakakwana ABC mapurasitiki, inopenya uye inotsvedzerera. Iyo yakadzika midzi 1400ml yekukweva bhodhoro, hombe chinzvimbo.
AngelBiss Inotakurika Suction Machine inoshandiswa kune itsva Direct plug-in Bhodhoro System uye Double Anti-inopfachukira yekudzivirira system.
Iyo yakagadziridzwa kuti ishandiswe mune yakawanda mhando mhando emergency mamiriro uye nekuda kwekubuda kwebasa zvinodiwa.
AngelBiss Inotakurika Suction Machine inoshandiswa kuyamwa yemvura dzakasiyana siyana, senge pus, phlegm uye ropa. Icho chigadzirwa chekurapa chinowanzoshandiswa mukutarisira pamba, mazino uye chimbichimbi kana kamuri yekushandisa.
AngelBiss Portable Suction Machine inogona kushandiswa mukutarisira kumba. Iyo muchina idiki saizi uye yakajeka kwazvo. Uye zviri nyore uye zviri nyore-kuenda kuishandisa.
Dentistry Inotakurika Kubvisa Machine
Yakagadzirirwa chaizvo kunyorera nekumisikidza kuyerera uye kumanikidza hunhu, inotakurika suction muchina inopa inokurumidza uye inoshanda nzira yekuchenesa ropa, kana imwe yekurapa mvura mukufambira mberi kwekurapwa kwamazino.
AngelBiss Inotakurika Suction Machine ine hunyanzvi Direct plug-in Bhodhoro Sisitimu uye Double Anti-inopfachukira dziviriro sisitimu. Yakagadzirirwa chaizvo kunyorera nekumisikidza kuyerera uye kumanikidza hunhu, inotakurika suction muchina inopa inokurumidza uye inoshanda nzira yekuchenesa ropa, kana imwe yekurapa mvura mukufambira mberi kwekurapwa kwamazino.
AngelBiss Electric Suction Machine (mapatya chirongo) ane hombe bhodhoro chinzvimbo (2500ml / bhodhoro rega rega), inogona kutora yakawanda yakawanda yemvura panguva yekuvhiya Uye ichapa mhinduro dzakanaka kumunhu anoishandisa. Uye zviri nyore kuchenesa. uye bhodhoro, rinoshandiswa zvakare mushure mekuchenesa.